राप्ती आँखा अस्पतालको विशेष सेवा - Goraksha Online
तुलसीपुर, ४ असार । मानव शरीरको महत्वपूर्ण अंग आँखा रोगको उपचारका लागि स्थापित राप्ती आँखा अस्पतालमा आँखाकै विभिन्न अंगहरुको उपचारमा विशेषज्ञ उपचारसेवा थपिन थालेको छ । राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरमा अब तीन विधाका विशेषज्ञ उपचारसेवा सञ्चालनमा आउने अस्पतालले जनाएको छ ।
राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरमा आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अस्पताल व्यवस्थापनले सव इस्पेशलाइज सेवा सञ्चालनको घोषणा गरेको छ । यसै आर्थिक बर्षदेखि अस्पतालमा अकुलो प्लाष्टिक क्लिनिक, रेटिना क्लिनिक तथा कोर्निया क्लिनिक सञ्चालनको तयारी भइरहेको छ । आँखाका भिन्न–भिन्न अंगको भिन्न–भिन्न प्रकृतिको विशेषज्ञ उपचारका लागि अस्पतालले जनशक्ति समेत व्यवस्थापन भैसकेको जनाएको छ ।
अकुलोप्लाष्टिक क्लिनिकको आइतवारै संविधानसभा सदस्य बुद्धिराम भण्डारीले एक समारोहबीच शुभारम्भसमेत गरेका छन् । आँखा उपचार सेवा आफैमा विशेषज्ञ सेवा रहेको बताउँदै प्रमुख अतिथि भण्डारीले आँखा उपचारभित्रै थप विशेषज्ञ उपचार सेवा प्रवाह गरेकोमा आभार समेत व्यक्त गरे ।
अस्पतालमा शुभारम्भ भएको अकुलोप्लाष्टिक सेवा विशेषगरी कस्मेटिक उपचारसँग तथा आँखाको क्यान्सर रोगसँग पनि जोडिएको विशेषज्ञ उपचार पद्धति भएको अकुलोप्लाष्टिक विशेषज्ञ डा. सुरेश रसाइलीले पत्रकारहरुमाझ बताएका छन् । डा. रसाइलीले तिलगंगा आँखा अस्पतालको फेलोसिपमा एक बर्ष सो विशेषज्ञ सेवाको कोर्ष पूरा गरेका हुन् । आँखा उपचारमा एमडी गरिसकेपछि थप एक बर्ष अकुलोप्लाष्टिक सेवामा अध्ययन पूरा गरेपछि मात्रै यो विशेषज्ञ सेवा उपलव्ध सम्भव भएको हो । यसमा विशेषगरी दुर्घटनाका कारण आँखाका विभिन्न भागमा चोट लागेका व्यक्तिहरुको प्लाष्टिक सर्जरीका माध्यमबाट शल्यक्रियासमेत गरिने डा. रसाइलीले बताएका छन् ।
त्यसैगरी अर्का नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. ज्योति सापकोटाले कर्नियासम्बन्धी आँखा रोगको विशेषज्ञ सेवाको कोर्ष पूरा गरिसकेकी छिन् । उनको अध्ययन पूरा भएसँगै राप्ती आँखा अस्पतालमा यही आर्थिक बर्षदेखि यो विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने तयारी भइरहेको छ । यससँगै अब अस्पतालमा आँखाको नानीमा रहेका ६ वटा लेयरहरुमा हुने समस्याको विशेष प्रकृतिबाट उपचार हुनेछ । अत्याधुनिक मेसिन मार्फत यो सेवा उपलव्ध चाँडै सञ्चालनमा आउने डा. सापकोटाले बताइन् । आँखामा फुलो परेको तथा आँखा सुख्खा हुने समस्यामा विशेष लाइटको प्रयोग गरी समस्या पहिचान गरी उपचार गरिने पनि डा. सापकोटाको अभिव्यक्ति थियो ।
त्यसैगरी आँखा रोग विशेषज्ञ डा. सन्तोष सुवेदीले रेटिनाका विषयमा थप एक बर्षे फेलोसिप पूरा गरिसकेका छन् । उनको यो विशेषज्ञतासँगै अब राप्ती आँखा अस्पतालमा आँखाको पर्दामा समस्या देखिएका बिरामीहरुलाई विशेष उपचार सेवा प्रदान गरिने छ । डा. सुवेदीले आँखाको पर्दामा हुने विभिन्न समस्या र निदानका विषयमा समेत पत्रकार भेटघाटका अवसरमा जानकारी गराएका थिए ।
नेपाल नेत्रज्योति संघ दाङका सहसचिव चिरञ्जीवी रिजालको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा अस्पतालका प्रशासनिक इन्चार्ज किरण पौडेलले राप्ती आँखा अस्पतालमा तत्काल थप गरिने विशेषज्ञ उपचार सेवासहित अस्पतालको सेवा विस्तारका सन्दर्भमा जानकारी गराएका थिए । अस्पतालले अब छिटो–छरितो उपचार सेवा पाउने चाहना भएका व्यक्तिहरुका लागि नियमितभन्दा केही बढी शुल्क लिएर फास्ट ट्रयाक उपचारसेवा उपलव्ध गराइने घोषणा गरेको छ । विशेषज्ञ चिकित्सक सहितको यो सेवा लिनका लागि टिकट शुल्कमा मात्र बृद्धि गरिएको अस्पतालले जनाएको छ ।
प्रयोगशाला लगायतका अन्य शुल्कमा भने फास्ट ट्रयाकमार्फत गएकालाई पनि थप शुल्क लाग्ने छैन । अस्पतालमा हुने भीडभाडको व्यवस्थापन तथा आवश्यक परेका व्यक्तिहरुका लागि सेवाको सहजताका लागि फास्ट ट्रयाक सेवा प्रारम्भ गरिएको अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेण्ट डा. शुलक्ष्मी कटुवालले बताएकी छिन् ।
व्ल्याक फंगसको संक्रमण छैन : अस्पताल
यसैबीच राप्ती आँखा अस्पतालले ब्ल्याक फंगसको संक्रमण राप्ती आँखा अस्पताल मातहतका स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नदेखिएको बताएको छ । विश्वमा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टका कारण भारतलगायत नेपालका विभिन्न भागमा यो संक्रमणका बिरामीलाई व्ल्याक फंगसको समस्या पनि देखिएको थियो ।
यसले आँखाको नानीमा प्रत्यक्ष असर गर्नुका साथै आँखा लत्रिनेलगायतका गम्भीर समस्या समेत देखिएका थिए । जुन संक्रमणले आँखाको नानीमा असरसँगै मस्तिष्कमा समेत गम्भीर असर पार्नसक्ने चिकित्सकहरुले चेतावनी दिएका थिए । ‘लमही अस्पतालमा एउटा मात्र त्यस्तो सस्पेक्टेड केश आएको थियो, हामीले रिफर गरेका थियौँ, पछि बुझ्दा त्यो पनि रिकभर भइसकेको थियो’, प्रमुख मेसु कटुवालले भनिन् । अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरुमा भने यस्तो केश नदेखिएको उनले बताइन् ।
तुलसीपुरमा सिटी क्लिनिक
त्यसैगरी अस्पतालले सेवा विस्तारका क्रममा रक्षाचारमा उपचारसेवा सँगै त्यहाँ पुग्न नसक्ने बिरामीहरुलाई समेत लक्षित गर्दै तुलसीपुर बजारमा सिटी क्लिनिक सञ्चालनको तयारी गरेको छ । ‘आँखारोग विशेषज्ञसहित ओपिडी, माइनर अप्रेशन, चश्मा वितरण तथा औषधिसमेत उपलव्ध हुनेगरी सिटी क्लिनिक सञ्चालनमा आउनेछ’, अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष कृष्णकुमार गिरीले भने ।
सिटी क्लिनिकका लागि उपयुक्त स्थानमा भवन खोज्ने काम भइरहेको बताउँदै सिटी क्लिनिक पनि चाँडै सञ्चालनमा आउने अध्यक्ष गिरीले बताएका छन् । सिटी क्लिनिक सञ्चालन भएसँगै सानातिना समस्या सोही क्लिनिकमै समाधान हुने पनि अस्पतालले अपेक्षा लिएको छ ।
त्यसैगरी अस्पतालले सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि शनिवार पनि सेवालाई निरन्तरता दिने र आवश्यक परे शल्यक्रियासमेतको सेवा उपलव्ध गराउने जनाएको छ । यसअघि आकस्मिक सेवा मात्र उपलव्ध हुने गरेको थियो । सटरडे क्लिनिक सञ्चालनमा आएपछि बिरामीहरुले शनिवार पनि विशेषज्ञ चिकित्सक सेवा पाउन सक्नेछन् । त्यसैगरी मेसिनबाट गरिने मोतियाविन्दुको शल्यक्रियालाई बढाउँदै लैजाने पनि अस्पतालले जनाएको छ ।
सकेसम्म म्यानुअल विधिलाई कम गर्दै मेसिनबाट मोतियाविन्दुको शल्यक्रियालाई प्राथमिकतामा लैजाने अस्पतालले लक्ष्य लिएको छ । ‘हामीले फेको विधिलाई कम्तीमा ७० प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने लक्ष्य लिएका छौँ’, पत्रकार सम्मेलनमा नेत्र ज्योति संघका सुरेन्द्र खड्काले भने ।
फेको मेसिनमार्फत शल्यक्रिया गर्दा केही शुल्क लाग्ने भए पनि त्यसलाई अझै कम गर्नका लागि स्थानीय पालिकाहरुसँग सहकार्य भइरहेको पनि बताइएको छ । तर कुनै बिरामीहरुलाई भने फेको मेसिनबाट शल्यक्रिया गर्न नमिल्ने अवस्था पनि रहन्छ । त्यस्ता बिरामीहरुलाई भने म्यानुअल प्रविधिबाट मोतियाविन्दुको शल्यक्रिया गरिने बताइएको छ ।
त्यसैगरी अस्पतालमा एकेडेमिक शिक्षालाइ पनि क्रमशः बढाउँदै लैजाने बताइएको छ । यसअघि नै प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्को सम्बन्धनमा अप्थाल्मिक असिस्टेन्टको पढाइ सुरु गरिसकेको अस्पतालले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग समन्वय र सहकार्य गरी आँखा रोग विशेषज्ञको पढाई समेत सञ्चालनको तयारी गरेको पनि पत्रकार सम्मेलनमा बताइएको छ । पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण अस्पतालका सूचना अधिकृत बालाराम खड्काले गरेका थिए ।